I-Modern North Side Townhome - Eduze Nezitolo Zokuthenga!
Cheyenne, Wyoming, i-United States
U-Kelly unokuphawula okungu-163 kwezinye izindawo.
I-Modern North Side Townhome ilungele imibuthano yomndeni noma abahambi bebhizinisi. Inamagumbi okulala ama-3 nezindawo zokugeza ezi-2, le ndlu yedolobha ebukeka kahle ingahlalisa abahambi abayisi-8. Jabulela ikhishi elihlome ngokuphelele, i-Smart-screen ye-Smart TV, iwasha esendaweni yokomisa nokunye. Itholakala kalula eduze kwesifunda seDel Range esidumile sokuthenga, izindawo zokudlela, izinkundla zemidlalo yaseshashalazini. Imizuzu eyi-15 ukuya eFrontier Days, State Capitol, Old West Museum kanye nedolobha.
✔I-Starbucks Ikhofi / i-Dunkin Donuts I-Decaf / Itiye / ama-sweeteners
✔Indawo yokupaka ekhethiwe
✔Smart TV nge-Roku
✔Imibhede enethezeke ngokwedlulele ene-King and Queen Pillows
✔Izinto zokugeza ezisezingeni eliphezulu nezinsipho
✔Amathawula amahle ngempela
Lo mbungazi unokushiwo abanye okungu-163 kwezinye izindawo zokuhlala. Veza okunye okushiwo abanye
Leli khaya libekwe maphakathi nendawo yokuhlala ethule, kepha lingamabhlokhi ambalwa ukusuka eDel Range Business District, indawo yaseCheyenne eyimfashini.
Isitolo segrosa esiseduze, iKing Soopers, amabhange negalaji likaphethiloli ziphezulu nje ngomgwaqo kwesokunxele, futhi uma uqonda Kwesokudla uzothola wonke amabhizinisi amasha - okuthenga, izitolo zekhofi, izindawo zokudlela, izitolo ezinkulu zamabhokisi, inxanxathela yezitolo nezinye ezisemfashinini. amabhizinisi. (Starbucks, Walmart, Menards, Bed Bath & Beyond, Barnes and Noble, Chick Fil A, Chili's, Chipotle... ukusho abambalwa)
IDowntown Cheyenne yomlando iqhele ngemizuzu eyi-15 kuphela, futhi isingatha Imicimbi yeFrontier Day, Museum, Parade, Botanical Gardens, izindawo zokudlela, nezitolo zakudala.
Ngezinsuku ze-Frontier, imicimbi eminingi isenkabeni yedolobha naseFrontier Park. Lezi zindawo zidumile futhi "okufanele ukwenze", kodwa futhi zingaba matasa futhi ziminyene lapho wonke umuntu eza e-Cheyenne ehlobo.
Leli khaya lisendaweni efanele ukuba seduze ngokwanele (15 min drive) ukuze ukwazi ukujoyina ubumnandi, ngenkathi futhi likunikeza indawo yokubalekela futhi ujabulele isikhathi esithule lapho uqedile.
Kunezindawo zokupaka ezi-2 ezikhethiwe ngakho awusoze waba nenkinga yokupaka lapho ufika ekhaya.
Indlu iyazingenela wena kanye nekhiphedi emnyango ongaphambili, ngakho-ke ungakwazi ukuza futhi uhambe lapho uziphumulele. Uzoba nendlu yonke kanye nedekhi yangemuva uwedwa.
Ngokuvamile sikushiyela indawo, kodwa siyatholakala uma udinga okuthile.
Hlola ezinye izinketho ezise- Cheyenne namaphethelo